Xiddiga ugu fiican Taariikhda kubbada cagta, Daaficii ugu adkaa uu wajahay & Griezmann oo dhowr arimood ka hadlay – Gool FM
(Madrid) 26 Feb 2019. Weeraryahanka reer France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann oo doortay xidiga ugu fiican saaxiibadii uu ka garab ciyaaray xirfadiisa, iyo sidoo kale kan ugu fiican taariikhda kubada cagta.
Wargeysk “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu dhawaan Griezmann kaga hadlay arintan wuxuuna yiri:
“Diego Costa waa ciyaaryahanka ugu fiican ee saaxiibadii aan ka garab ciyaaray, sababtoo ah wuxuu si weyn igaaga caawiyay gudaha garoonka, wuxuu ii ogolaadaa inaan si xor ah u ciyaaro, si fiican ayaana isku fahanaa, waxaa intaas sii dheer waa dagaal yahan, aad ayaan u jeclahay”.
Intaas waxaa sii dheer Antoine Griezmann ayaa waxaa wax laga weydiiyay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubada cagta aduunka.
“Taasi waxay ku xiran tahay wakhtiga, waxaan doonayaa inaan dhaho Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo, sababtoo ah ma arkin Pele ama Maradona oo ciyaaraya, waa xaalad adag sababtoo ah qof walba wuxuu leeyahay qaab ciyaareed u qaas ah”.
“Zinedine Zidane waxaan sidoo kale ku tix galiyaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican, wuxuu ku guuleystay koobka aduunka, halka Messi iyo Ronaldo aysan wali ku guuleysanin tartankan”.
Ugu dambeyn weeraryahanka France iyo kooxda Atletico Madrid ayaa wuxuu u doortay difaacii hore kooxda Rea Madrid ee Pepe, inuu ahaa kii ugu adkaa uu abid kaga hor yimid xirfadiisa kubada cagta, isagoo sheegay in xili kasta ay ku adkeyd inuu kubada la dhaafo.
Halyeeyga kooxda Barcelona ee Rivaldo oo difaacay Gareth Bale, kahor kulanka El Clásico